Ngwaahịa na Supplọ ọrụ | Ndị na-emepụta ngwaahịa ndị China
Akwụkwọ ịde ihe
Akwụkwọ mmado Tatoo
Ista emeghe egg
Pụrụ iche noodles na ...
ahaziri nkọwa, ...
Cover ụkpụrụ customization ...
Omenala akpụkpọ anụ agba omenala ...
Elu-edu environmentally friendly Pu akpụkpọ anụ akwụkwọ azụmahịa
Cover ụkpụrụ customization nkọwapụta customization mfe akwụkwọ akwụkwọ
Udiri akwukwo akwukwo akwukwo mmiri Họrọ akwukwo maka akwukwo akwukwo: Nke mbu, ogo akwukwo. N'ozuzu, akwụkwọ eji eme ihe bụ akwụkwọ aja aja Daolin. Ọdịdị nke akwụkwọ abụọ a bụ nke kachasị mma n'etiti akwụkwọ ederede ọhụụ. Kinddị mpempe akwụkwọ a nwere obere ihe eji eme ihe, na -emepụta ink ink, ezigbo ire ụtọ, kọmpat na opaque udidi, mmiri na-eguzogide mmiri, mmetụta dị ike atọ, yana ezigbo mma na ọnụ ala! Ahaziri akwụkwọ na-amụrụ akwụkwọ 1. Akwụkwọ bụ otu n'ime m ...
ahaziri logo, ahaziri nkecha n'ime peeji nke nduhie akwụkwọ
Oge opupu ihe ubi nke akwukwo nnochi obula nke akwukwo a apughi ime ka ndi otu mara ihe. Enwere ike ịdepụta akwụkwọ ndetu mgbasa ozi dị mfe nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara dịka ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ahụ wee mepụta nkwalite ọdịbendị akara, nke mere na onyinye ndị otu ụlọ ọrụ na-enye dị mfe ma mara mma, ọ na-egosipụtakwa uto ndị otu. Flannel Propaganda Notepad Notepad page nhọrọ: General ma ọ bụ mgbasa ozi ndetu: akwụkwọ nka mara mma / froste ...
Omenala nkọwa omenala katuunu ụkpụrụ anụmanụ katuunu igbu akwụkwọ mmado
Aha: Ihe osise katuunu akara mmado Agba / ụdị: agba, ihe dị iche iche monochrome Ihe osise a na-atụ anya igbu egbugbu Size / ihe atụ: 10 * 20cm Afọ kwesịrị ekwesị: 3+ Ihe: akwụkwọ Nkwakọ ngwaahịa: otu mpempe akwụkwọ na kaadị azụ na OPP akpa Usoro: obibi / gluing, nkwakọ ngwaahịa Adị ndụ: Afọ 1 Safetykpụrụ nchekwa: nwere ike ịgafe ule dị mkpa nke ụkpụrụ EU / US ihe egwuregwu ụmụaka Abstracting cartoon akwụkwọ mmado Ohaneze, akara mmado bụ akara mbufe mmiri. Ọ bụrụ na ụkpụrụ ahụ dị square ma ọ nweghị ọtụtụ protrus ...
Ahaziri akpụkpọ anụ agba, ahaziri ọla elu nkwakọ agba, ahaziri multi-ọrụ onyinye notepad
Notdị mpempe akwụkwọ onyinye a kachasị elu, mpempe akwụkwọ mpụta na-ejikọ akpụkpọ anụ, na ibe dị n'ime ka ejiri 100g akwụkwọ edemede mejupụtara elu. Nke a na ụdị akwụkwọ nwere obere mgbanwe, edo ink absorption, ezigbo ire ụtọ, uko udidi na opacity, na ike mmiri na-eguzogide. , Nwere ikike siri ike nke akụkụ atọ, yana mkpịsị ode mmiri nke nwere mmiri dị elu nwere eriri magnetik ọla nwere otu ụkpụrụ na eriri. Mejupụtara ọmarịcha igbe onyinye onyinye. Ebe ahụ ...
omenala akpụkpọ anụ na agba omenala nkọwapụta azụmahịa nkechi akwụkwọ
Akwụkwọ ndekọ azụmahịa a dị elu nwere ọdịdị dị elu na ọdịdị dị ala na-enweghị atụfu ya. A na-eji mpempe akwụkwọ na-acha agba akpụkpọ anụ nke dị n'èzí, akwụkwọ dị n'ime ya bụ akwụkwọ 80g mejupụtara mejupụtara, na mmechi mechiri igwe ndọta na akpụkpọ anụ. Cortex dị na mpụta dị nro. Peeji nke dị n'ime ụdị akwụkwọ a nwere obere nkedo, ịdepụta ink edo edo, ịdị mma dị mma, ọdịdị siri ike na opaque, nguzogide mmiri siri ike, na ike siri ike ...
ahaziri nkọwa, ahaziri ụkpụrụ mara mma, ọmarịcha akara mmado
Akwụkwọ mmado tattoo tattoo Aicetiks mmado na-enye gị obere mma na ndụ gị nkịtị. Anyị ga-enwe ndidi na usoro iji akara mmado. Anyị kwesịrị iji nlezianya wepu ihe nkiri nke akara mmado. Anyị kwesịrị belata ọnụ ọgụgụ nke ngwaahịa na nkuku iji zere ịrapara n'ahụ anyị. Mgbe ahụ, anyị kwesịrị ikpuchi elu nke egbugbu ahụ na usoro dị larịị ebe egbugbu ahụ dị. Mgbe ahụ, anyị nwere ike iji akwa mmiri ma ọ bụ mmiri ọkụ mee ka akwụkwọ mmado mee nwayọ. Ọkara nkeji mgbe nke ahụ gasịrị, ọ kpughere ...
Hazie ụdị dị iche iche dị mma, monochrome na akwụkwọ mmado tattoo mara mma
Monochrome akwụkwọ mmado tattoo mara mma Uru nke akwụkwọ mmado tattoo mara mma: ederede mara mma, agba doro anya na mmetụta akụkụ atọ siri ike. Stylesdị dị iche iche, mara mma na ejiji, ọmarịcha ọrụ, ọnụahịa ọkacha mma Ngwaahịa a na-eji gluu wepụ, enwere ike iji ya ugboro ugboro na-enweghị akara ọ bụla mgbe ọ kwụsịrị. Ọ naghị emebi ihe ahụ, njedebe nke ọkụ na teknụzụ igwefoto enweghị ike ịmịpụta nsonaazụ ahụ. Ihe natara dị mma karịa foto a. N ...
Ahaziri akpụkpọ anụ agba na-atọkwa akpa akwụkwọ onyinye ọla igbe set
High-ọgwụgwụ ọla igbe Ngwaahịa a ka nke akpụkpọ anụ ákwà, plastic shei, metal njikọ nkechi, flocking ihe, atọ isi akụrụngwa na-anwụ-ịkpụ shapes, kpachie kpachie, na mama bonding. Ọdịdị jupụtara na nnukwu njedebe. Dị ịchọ mma bụ ihe siri ike, na ọla ndị dị n'ime ya nwere ike igosipụta mmetụta nke okomoko dị elu. Akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ na-acha ọbara ọbara, aja aja, na oji, na ime ya dị na agba aja aja, oji, odo, aja aja na agba ndị ọzọ. ...
Ahaziri pearlescent agba elu dị iche iche embossed ọla onyinye igbe set
Ngwaahịa a bụ nke peel pụrụ iche pụrụ iche, kaadiboodu 3mm gbara ọkpụrụkpụ, shei rọba, eriri na-ejikọ igwe, ihe na-efe efe, bepụ ụdị achọrọ na ọla ịnwụ, yana ejiri aka ya na gburugburu ebe obibi. Ọdịdị ahụ gosipụtara ọla pel, ime ahụ jupụtara na okomoko dị oke ọnụ, mputa na-acha ọcha, acha anụnụ anụnụ, ọla edo, ọlaọcha, na-acha ọla edo, ime dị oji, aja aja, ọbara ọbara, agba aja aja na agba ndị ọzọ ịhọrọ, na ngwaahịa size dịkwa dị ka y ...
Ahaziri ụkpụrụ size mpịakọta ihennyapade ngwaahịa ihennyapade
Ngwaahịa nkọwa Product ihe: ọla kọpa akwụkwọ ihe onwunwe, eyi sịntetik akwụkwọ, peal ịse, mgbochi-adịgboroja ihe onwunwe, uzo roba ihe onwunwe, na-enwu gbaa ọlaọcha roba n'elu ihe onwunwe, matte ọlaọcha roba n'elu ihe onwunwe, 3D agba na-agbanwe ebu ihe onwunwe, wdg pụrụ iche ihe nwere ike mepụta dị ka chọrọ. Product isi ihe ： ndabere akwụkwọ quality, pụrụ iche ihe nwere ike ahaziri dị ka chọrọ. Product isi dayameta ： ejikarị 30mm, 40mm, 75mm, othe ...
Hazie ọtụtụ agba na nha dị iche iche akara mmado
Aha ngwaahịa Product ụkpụrụ agba afụ ihennyapade ngwaahịa atụmatụ feeling mmetụta aka dị mma, arụmọrụ mmiri na-adịghị mma, adịghị mfe imebi, nnyapade mmado dị mma, ogologo oge, adịghị mfe ịda, ụdị dị iche iche, ọmarịcha na avant-garde ejiji, gburugburu ebe obibi enyi na enyi ihe, doro anya ụkpụrụ obibi, ugboro ugboro pasting, wdg Product uru ： factory kpọmkwem ahịa oké ọnụ, ọkachamara customization, mma-emesi obi ike, ụkpụrụ customization, LOGO, ihe onwunwe, specifi ...
Adreesị: Nanlian Industrial Village, Nanlian Community, Longgang Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China